भारतमा लोकसभा निर्वाचनः कहाँ कति मत खस्यो ? (मत प्रतिशतसहित) « Bagmati Samachar
भारतमा लोकसभा निर्वाचनः कहाँ कति मत खस्यो ? (मत प्रतिशतसहित)
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार १४:५७
२८ चैत । काठमाडौ । भारतीय लोकसभा निर्वाचन अन्र्तगत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ९१ सिटका लागि मतदान भएको छ ।आज साँझ ५ बजे पहिलो चरणको निर्वाचन समाप्त भएको छ । पहिलो चरणको मतदान १८ राज्य र दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो । केही स्थानमा खरेको मत प्रतिशत समेत सार्वजनिक भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार बिहारमा ५०.२६ प्रतिशत, पश्चिम बंगालमा ८० प्रतिशत, उत्तर प्रदेशमा ५९.७७ प्रतिशत, उत्तराखण्डमा ४६.५९ प्रतिशत, ओडिसामा ६६ प्रतिशत, तेलंगनामा ६०.५७ प्रतिशत मत झरेको छ । त्यस्तै जम्मु काश्मिरमा ४६ प्रतिशत, सिक्किममा ५५ प्रतिशत, मणिपुरमा ७८.२० प्रतिशत, मिजोरममा ५५.२० प्रतिशत, नागाल्याण्डमा ७३ प्रतिशत मत झरेको छ । त्यसैगरी असममा ६८ प्रतिशत, मेघालयमा ६२ प्रतिशत मत झरेको जनाइएको छ । अन्य स्थानको मतपरिणाम भने आउने क्रम जारी छ ।
पश्चिम बंगालमा झडप
मतदानका क्रममा पश्चिम बंगालको कूच बिहारमा झडप भएको जनाइएको छ । सो झडपमा राज्यको सत्तारुढ दल टीएमसीका कार्यकर्ताहरुको हात रहेको भाजपाले आरोप लगाएको छ । यद्यपि, सो आरोपको टिएमसीले खण्डन गरेको छ ।
आन्ध्र प्रदेशमा भएको झडपमा १ जनाको मृत्यु
आन्ध्र प्रदेशको अनन्तपुर जिल्लामा पार्टी कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको हो । राज्य सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी तेलुगु देशम र वाइएसएर काँग्रेसका समर्थकबीच झडप भएको जनाइएको छ । यो झडपमा अन्य ४ जना घाइते भएको जनाइएको छ । आन्ध्र प्रदेशमा २५ सिटका लागि मतदान भएको थियो ।
त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा मुजप्फरनगरमा बसपा कार्यकर्ताले मतदान कार्यक्रम रोक्ने कोसिस गरेको अरोप स्थानीय प्रशासनले लगाएको छ । उता, महाराष्ट्रको गढचिरौली जिल्लाको एटापल्लीको एक मतदान केन्द्र नजिकै विष्फोट गराएको जनाइएको छ ।
सो घटना लगत्तै केहीबेर मतदान प्रक्रिया रोकिएको र साँझ मतदान अधिकारीहरुले मतदान प्रक्रिया सुचारु गरेका थिए । सात चरणमा हुने आम निर्वाचनको पहिलो चरण सकिएको छ । बाँकी राज्य र जिल्लाहरुमा आगामी मे २३ सम्म निर्वाचन हुँदैछ ।